Ndiani akaimba rwiyo rwerwiyo rwaRandy Orton? - Wwe
Ndiani akaimba rwiyo rwerwiyo rwaRandy Orton?
Rwiyo rwemusoro weSuperstar ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvehunhu hwake hwekurwa. Inopa hutsva hutsva pahunhu hwavo, izvo zvinovabatsira mukupfuura neWWE Nyika.
Kana zvasvika pakusarudza mimhanzi yakanaka yekupinda, Randy Orton anoita kunge ane rombo rakanaka. Mune ake maviri-gumi-marefu basa, Iyo Viper yakashandisa dzimwe dzakanakisa wrestling theme nziyo dzese nguva.
Tose tingabvuma izvozvo here @RandyOrton ine imwe yenziyo dzakanakisisa dzese
- JMulls (@HaloJmulls) Mbudzi 13, 2015
Rwiyo rwake rwemazuva ano rwiyo, 'Manzwi,' inoonekwa sechimbo chemumhanzi pakati penharaunda yekurwa. Zvinotaridzika senge yakakwana zvakakwana kune yake isingafungidzike gimmick.
Ndiani akaimba rwiyo rwanhasi rwerwiyo rwaRandy Orton?
Mushure mekubuda kwake kubva kuEvolution muna Nyamavhuvhu 2004, Randy Orton akatanga rwiyo rutsva rwiyo runonzi 'Burn In My Light' naMercy Drive. Mune kubvunzana kwekare, Iyo Viper yakaratidza kusafara kwake neyekutanga post-Evolution yekupinda mimhanzi.
Akataura kuti aisada 'Kupisa Muchiedza Changu' zvachose. Akakumbirawo maneja eWWE kumupa dingindira nyowani panzvimbo yayo. Iyo Viper yakashandisa iyi theme kwemakore mana anotevera isati yapedzisira kuitsiva neVoices. Orton zvakare akashandisa muchidimbu 'Uyu Moto Unopisa' naKillswitch Shingairira muna 2006.
Pese pandinoteerera Burn muChiedza changu, handigoni kubatsira asi kunyemwerera kuti yakawanda sei @RandyOrton anozvivenga!
- Ashleigh (@__Sephiroth) Kubvumbi 17, 2011
Randy Orton akazviona iri rwiyo rukuru uye rakaringana hunhu hwake. Nehurombo, Vince McMahon haana kunzwa nenzira imwechete uye akaramba Orton kuti asashandise dingindira iri zvakare. Nekudaro, Orton akadzokera pakushandisa dingindira rake rekare zvekare. 'Uyu Moto Unopisa' wakazopihwa CM Punk.
Muna 2008, Vince McMahon akazadzisa chishuwo chaOrton chekuva nemusoro mutsva wekupinda kwake. Randy Orton akatanga hurukuro yake ye'Voices 'muna2008. Yakaratidza kuve rwiyo rwake rwekurwira dingindira kusvika parizvino. Iyo WWE Universe yakawira murudo nemusoro wenyaya uyu, sezvo zvainyatsoratidza hunhu hwaRandy Orton.
Rwiyo rwenziyo rwakaratidza Orton sechisikwa chisina mweya chisingazeze pakuparadza vanopikisa.
Vanhu vanowanzo bvunza nezve iye akagadzira ino yehunyanzvi. Zvakanaka, rwiyo urwu rwakagadzirwa nekubatana pakati peanonyanya kuzivikanwa American Rock bhendi Rev Theory uye mukurumbira WWE mumhanzi munyori, Jim Johnston. Richard Luzzi, muimbi anotungamira webhendi, akapa mazwi eiyi theme theme.
Vaviri Jim Johnston naRich Luzzi vaifanira kushanda zvakanyanya kuti rwiyo urwu rukwane zvakakwana kuViper's demented persona. Maererano neBleacher Report, Mupfumi akafamba neiye-gumi nemana-nguva World Champion kweinopfuura vhiki kuti awane mazano ehurukuro.
Mukubvunzurudzwa, Jim Johnston akaburitsawo pfungwa dzeboka panguva yekusika rwiyo. Ivo vaida kutora hunhu hwaRandy Orton uye hunhu hwake husingafungidzirwe. Ivo zvirokwazvo vakaita basa rakakura mukuita saizvozvo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti WWE yakashandisa akati wandei enzira dzaRev Theory munguva yakapfuura. Rwiyo rwavo 'Chivheneke' yaive dingindira repamutemo reWrestleMania 24. Iyo kambani yakashandisawo yavo 'Hell Yeah' track muna 2008 yeOne Night Stand pay-per-maonero.
Iyo bhendi zvakare pamwe chete yakaita kuratidzika kwakasarudzika kuWrestleMania 30 uko kwavakaita live performance yeRandy Orton's Voices theme.
Randy Orton parizvino chikamu chemubatanidzwa unonakidza neRiddle paWWE RAW
RK-BRO MITEMO #WWERaw @StrikesFirst pic.twitter.com/VRCrr2FrXJ
- WWE. (@ActuaIIyWWE) Chikumi 15, 2021
Randy Orton anga ari pane roll munguva pfupi yapfuura. Yake nyowani tag timu neRiddle yakaratidza kuve chimwe chezvakanakisa zvinhu nezveWWE RAW mumavhiki apfuura.
Pane ichangoburwa episode yeWWE's flagship show, Orton naRiddle vaive nemakwikwi akakwikwidza neaimbove makwikwi emakirabhu-nguva mazhinji, The New Day.
Zvinotoshamisa kuti Team RK-Bro yakatora kukunda. Kukunda kweNew Day kwakawedzera mikana yaOrton naRiddle yekukwikwidza mazita eRAW Tag Team munguva pfupi iri kutevera.
Ungade here kuona Team RK-Bro seRAW Tag Chikwata Chikwata? Ridza mhere mune zvakataurwa pazasi.
Kuti ugare uchigadziriswa nenhau dzichangoburwa, makuhwa, uye nharo muWWE mazuva ese, Nyorera kuchikwata cheYouTube cheSportskeeda Wrestling .
maitiro ekuregedza uye kuvimba nehukama
ndoziva sei kuti yapera
christina pamhenderekedzo yekurambana
sei kusave musikana ane godo
maitiro ekuita kuti mukomana wako ave ane rudo
murume wangu anondipomera zvese zvinokanganisika